Financial Modelling Batch-2 | Matrix Institute of Professionals
School Of Finance & Entrepreneurship
"Grow Professional... Grow Together"
International Certified Course
PEM Youth Camp
Matrix Talent Program
Matrix Certified Professionals
Talent Program Pathway
Matrix Advisory Services
Financial Modelling Batch-2
Financial Modelling (Batch 2) 24th March 2019
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ Matrix Institute of Professionals က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ Finance Professionals တိုင်းရဲ့ လက်ဆွဲ Financial Modelling Course ရဲ့ Batch2ကို မကြာခင်မှာ ထပ်မံဖွင့်လှစ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းလေးစားစွာဖြင့် သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်….
Financial Modelling နဲ့ ဘာလုပ်လို့ရလဲ ဆိုရင်
It gives the ability to Finance & Investment Professionals to exercise and simulate the whole financial operations of the entire business in excel at their fingertips
နောင်တစ်ချိန်မှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာ နိုင်တဲ့ စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး လူမှုရေး အခြေအနေတွေ အပေါ်မှုတည်ပြီး business တစ်ခု ရဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ ရှိနိုင်မယ့် performance ကို Excel ထဲ မှာတင် ကြိုတင်တွက်ချက်ရာထားနိုင်ပါတယ်… သင့်လျော်မှန်ကန်တဲ့ နည်းဗျူဟာတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်ပါတယ်
Financial Modelling ကို ဘယ်သူတွေ အများဆုံး အသုံးပြုရလဲ?
Financial model တွေကို တည်ဆောက်ရတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လက်ရှိ Real-world မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ issues တွေ၊ situations တွေ ဘယ်လို နည်းလမ်းတွေနဲ့ နည်းဗျူဟာတွေချမှတ်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့အတွက်ပါ အဲ့တော့ အသုံးပြုရတဲ့လူတွေဟာ
Bank တွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Investment Banker များ, Credit Department က Professionals Accounting Investment Firms တွေ
Finance Professionals (CFO, Financial Analyst, Finance Manager, Portfolio Manager, Financial Planner, Risk Managers, Financial Advisor)
Accounting Professionals etc. အစရှိသူတွေ က အများဆုံး အသုံးပြုရပါတယ်…
Financial Modelling အကြောင်းလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်
Financial Modelling ကိုဘယ်လို နေရာတွေမှာ အသုံးချမလဲ?
Valuing Stocks and Bonds (undervalued, overvalued, fair-valued)
သင်တန်းမှာ လေ့လာရမယ့် သင်ခန်းစာတွေကတော့
To apply financial concepts and excel skills effectively
To create linkable, auditable, and presentable financial models
To use assumptions effectively in financial modeling (Revenue, Costs, Assets, Cash Flows)
To link financial statements effectively
Valuation Methods in DCF, Relative Valuation
အထက်ပါ အကြောင်းအရာတွေကို Company case များနဲ့ တွဲဖက်ပြီး Project, Case Study သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
U Min Han Tun, CFA Bachelor of Science in International Business, Finance Matrix Academic Director Daw Phyu Phyu Khin6years’ experience in Finance, Investments and Private Equity Bachelor of Business Management SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY (SMU)
Room: E-F, 3rd Floor, Bld No: 182-194, Botahtaung Pagoda Road, Pazundaung Township, Yangon.
(+95 1) 8245660, (+95 9) 445533288-289
© 2017-2019 Matrix Institute of Professionals. All rights reversed. Web Design by NetScriper